Zvikomborero Zvikuru Zvezvakagadzirirwa Zvakanyorwa Maererano Nekudzidzira Kuziva
Zvakagadzirwa zvinyorwa zvatinowana kubva kune mamwe mawebhusayithi uye tinoshandisa panzvimbo dzedu pachedu kana blog. Google, Bing, uye Yahoo inobva pa yezvinyorwa scraper uye web crawlers kuti vakwanise mawebhusayithi akasiyana. Zvishandiso izvi zvinobatsira kukura mabhizimisi uye zvakakodzera kune vese mapurogiramu uye vasiri mapurogiramu. Makambani maduku uye makuru-zhinji anotema zvinyorwa nguva dzose uye anozvichengetedza mune mamwe mazita edzidziso - bell hop game. Zvikomborero zvikuru zvemuitiro uyu zvinorondedzerwa pasi apa:
1. Inokodzera mabhizimisi:
Yelp, TripAdvisor, Zomato, Better Business Bureau, Amazon, Google, Trustpilot, nedzimwe makambani vanoshandisa zvinyorwa zvinowanikwa nguva dzose. Vanovimba nevashambadzi vakasiyana vewebhu nekuda kwemvumo yavo uye yakarurama. Mhando dzakasiyana-siyana dzinoenda kune dzimwe nhepfenyuro dzezvemagariro evanhu kuti dzikurudzire michina nemishandiro. Kana iwe ukabudisa tsanangudzo yemufananidzo uye mifananidzo ye e-commerce nzvimbo uye nhepfenyuro yemagariro evanhu, iwe uchawana mikana iri nani yekukura bhizinesi rako. Vashandi vepaWebhu uye vanogadzira mapurogiramu vanotsvaga nyanzvi dze LinkedIn uye vanochengetedza ruzivo rwekushandiswa kwepaIndaneti.
2. Kusiyanisa mabasa uye zvigadzirwa:
Mazuva ano, munhu wose anosarudza kutenga zvigadzirwa nemabasa kubva kuAlibaba, eBay, uye Amazon. Sewe webmaster, unogona kuunganidza zvakasiyana-siyana zvinyorwa uye uwane ruzivo rwakakunakira iwe pachako. Kana zvese zvakagadzirwa, unogona kuenzanisa zvinyorwa zvemagetsi, ruzivo rwekutengesa, uye mifananidzo. Inobatsira kuvandudza hutano hwezvigadzirwa zvako nemashandiro. Kana iwe uri kutarisira sangano remotokari uye uchida kutsvaga nhamba yakawanda yevatengi, iwe unofanirwa kuparadzira zvinyorwa kubva kune zvakasiyana-siyana uye kuenzanisa nhamba yemari yemotokari. Semuenzaniso, Uber uye Careet zvinotarisa pane zvinyorwa zvinosimudzira mabhizinesi avo. Vanopa tsanangudzo pamusoro pevatyairi vavo, motokari nemashoko ekutengo. Makambani aya anowanzosangana nezvatinotarisira kuburikidza nekupa rubatsiro rwechokwadi.
3. Zvinyorwa zvinyorwa uye kutsvakurudza:
Vadzidzi, nyanzvi, masayendisiti, vanachiremba uye venyeredzi vanoda zvinyorwa zvakagadzirwa kuti vaite mabasa avo. Vanounganidza mashoko pamusoro pezvinyorwa zvakasiyana kubva kune zviuru zvemawebsite. Mamiriyoni ezvinyorwa anobudiswa zuva rega rega, uye anobatsira kuwedzera huwandu hwekutsvakurudza. Iwe unogona nyore nyore kutsvaga kutsvaga uye kuchengetedza nguva yako nemari apo uchiita mabasa ako.
4. Kuronga kwakanaka kwemari:
Nhaurirano inotsvaga kurongwa kwakanaka kwemari. Iwe unogona kubvisa dhepfenyuro pamusoro pekutengeswa kwebasa, masimba ekutsvaga, maitiro azvino, uye zvigadzirwa zvemabhizimisi. Tumira. io uye octoparse rubatsire kuunganidza data inobatsira kubva paIndaneti uye kuitora sezvinoenderana nezvaunoda.
5. Kutenga nekubhadhara:
Kana uchida kutenga kana kubvarura chimwe chinhu, unofanirwa kupararira uye unzwisise zvinobudirira uye zvinotora zvemahofisi eimba. Iwe unogona nyore nyore kugadzira datasets, kugadzirira mazita evashandi, uye kuunganidza tsanangudzo pamusoro peimwe nzvimbo. Saizvozvowo, kana iwe uchida kutengesa chimwe chinhu, iwe unofanirwa kuunganidza uye kunyora deta nezvezvivako nemaguta.
A kugadzira chigadzi chinotsvaga ruzivo rwakakosha kubva kune mawebsite akasiyana, rinogadzirisa mapurogiramu epelenzi nemagiramu, uye inoita mabasa akasiyana-siyana. VaWebmasters nemapurogiramu vanoratidza RSS feeds, uye Twitter inopa mawebsite avo. Iyo inzira yakanaka yekuita vaverengi vakawanda, asi kuratidza ruzivo rwakanyanya kunogona kukanganisa mazita ewebsite yako. Saka, iwe unofanirwa kuratidza zvinyorwa zvinobatsira uye zvakarurama chete.